भान्छामा लुकेका हुन्छन् तौल घटाउने यी सामाग्री जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
धेरैजसो मानिसहरु आफ्नो भद्दा शरीरका कारण निकै तनावमा हुन्छन् । यसबाट छुटकारा पाउन डाक्टरको औषधीमा निर्भर हुन्छन् भने आयुर्वेदिक पद्धतीलाई पनि आफ्नो दैनिकीमा समावेश गर्छन् । तर यति गर्दा पनि तौलमा अलिकति पनि कमी नआउँदा चिन्तामा पनि हुन्छन् । तर कतिलाई मोटोपना कम गर्ने वास्तविक फर्मुला भान्छामा हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा हुँदैन ।
जुनसुकै बेला जे पनि खाँदा तौल बढ्छ । यदि हामी यस्तो बानी नियन्त्रण गर्छौं भने सायद केही हदसम्म तौल कम हुन सक्ला । तर पेटको आगोले तपाईंलाई खानाबाट टाढा बस्नै दिँदैन । यो समस्यालाई मेथीको दानाले हल गर्न सक्ला । तपाईंले चाहेको खण्डमा भोकलाई नियन्त्रित र शान्त गर्नका लागि मेथीको दाना प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यसले मधुमेह, उच्च रक्तचाप र उच्च कोलेस्ट्रोललगायतका समस्यालाई समेत रोक्न सहयोग गर्छ ।
हुन त जिराको प्रयोग खानाको स्वाद बढाउनका लागि गरिन्छ तर तपाईंलाई एक चम्चा जिरामा शरीरको तीन गुणा फ्याट बर्न गर्ने क्षमता पनि हुन्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ । जिराले हाम्रो शरीरमा मेटाबोलिजम प्रणालीलाई पनि सही बनाइराख्छ ।
अदुवा खानामा साथै विभिन्न पेय पदार्थमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर सायद तपाईंलाई यसमा बोसो पगाल्ने क्षमता छ भन्ने थाहा छैन । अदुवाले ब्लड सुगर अप्रत्याशित बढ्न नदिन मद्दत गर्छ ।
लसुनले तरकारीको स्वाद बढाउने गर्छ । साथै, लसुनले शरीरमा जमेको बोसोलाई कम गर्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ । यसका साथै यसले शरीरको तापक्रमलाई बढाएर बोसो घटाउने प्रक्रिया तीब्र पार्छ । यसबाहेक लसुनले रक्तचाप, छाती पोल्ने, हृदय रोग र अस्टियोअर्थराइटिसजस्ता रोगबाट पनि बचाउने गर्छ ।
तौल घटाउने नाममा गरिने यी गल्ती
अध्ययनहरुले पुष्टि गरेका छन् कि हरियो सागपातमा क्यालोरी कम हुन्छ । कम क्यालोरीले गर्दा यसको सेवनले मोटोपना बढ्दैन ।हरियो सागमा भुरपुर फाइबर हुन्छ जसले गर्दा पाचन राम्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि मुला, बन्दाकोभी आदि ।
१‍. आफुले खाने खानाहरुको बारेमा टिपोट बनाएर फुड जर्नल बनाउनुहोस ।
कार्डियो एक्सरसाइजले तपाइलाई क्यालोरी जलाउन मद्धत गर्छ । दिनको एक घण्टा पसिना आउने गरि कार्डियो एक्सरसाइज गर्नाले तपाईलाई छिटो तौल घटाउन मद्धत पुग्छ ।
Don't Miss it लामो समय बाँच्न चाहनुहुन्छ ? त्यसो भए तपाईले यी कार्य गर्न जरुरी छ
Up Next बेलुका ढिला खाना खानाले पर्नसक्छ स्वास्थ्यमा गम्भीर असर जानिराखाैँ
यस्ता राेगहरुकाे समाधान गर्न दैनिक दुई घण्टा उभिऔँ